Nkọwapụta Otu - Feng Erda Group
FENGERDA GROUPdị na Tengzhou City nke dị na ndịda nke Shandong Province ma nwee ọmarịcha ọnọdụ ala. ugwu na mmiri gbara ya gburugburu, ya na ugwu Tai dị na mgbago ugwu na Taierzhuang, ebe nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, na ndịda. Ọ bụ obodo nke "Saint Mozi" na "Craftsman Luban", nwere ihe karịrị nde iri isii na isii na mita anọ nke okooko osisi lotus n'ókèala ya-Weishan Lake Honghe Wetland Park, ọ bụkwa otu n'ime obodo ndị mara mma na-egosi njem nleta na China.
Tọrọ ntọala na 1998 ya na afọ iri abụọ nke mmepe, FENGERDA GROUP enweela ugbu a ka ọ bụrụ "ụlọ ọrụ dị iche iche, nke buru ibu ma hazie." Na ndị ọrụ 680 na ngụkọta akụ nke ijeri 2.8, o nwere ụlọ ọrụ isi anọ, ya bụ: Azụmaahịa Metal Dep., Alloy Business Dep., Injinia Teknụzụ Azụmaahịa Nchara.
FENGERDA GROUP na-ewere ya dị ka ọrụ ya iji gboo mkpa nke ụlọ ọrụ dị iche iche ma mejuo ndị ahịa na ọrụ ziri ezi na ogo dị elu.ahịa niile agafewo asambodo gụnyere "ISO9001: 2015 (Ogo)", "ISO14001: 2015 (Environment)" na " (GJB9001C-2017 (National Military Standard) ferromanganese, carburant wdg; Ndị kasị ibu n'efu igwe anaghị agba nchara nhazi na nkesa center na South Shandong na iche iche ụdị nke igwe anaghị agba nchara anwụrụ ahịa.
FENGERDA GROUPna-elekwasị anya na mma, na-emepụta akara, na-elekọta ndị ahịa ma na-eburu ibu ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ya mere, ọ natawo okwu ọnụ dị mma sitere na isi ụlọ ọrụ dị iche iche n'ụlọ na mba ofesi dịka "ụlọ ọrụ na-arụ ụgbọ mmiri, ụlọ ọrụ na-arụpụta ụgbọala, ụlọ ọrụ na-ebu ihe, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe na ígwè". -endị ndị ahịa, ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ "robot spray and mmiri and smelting composite materials" amatala na ọkwa mba ma gosipụta dị ka "ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na ụlọ ọrụ 100 kachasị elu" .N'ịgbaso ụkpụrụ nke ijere ndị ahịa ozi obi ha dum site n'obi. nke mgbanwe na mmepe, ụlọ ọrụ ahụ na-eche mba ụwa ihu ma na-eduga ọrụ na ịgbalịsi ike ịghọ "afọ 100, isi 100 na 10-ijeri".